Igumbi elihle lehotele iLake Gogebic Phuma
Igumbi lakho lokulala e indlu esemaphandleni sinombuki zindwendwe onguDominic
Ikhabhathi yegumbi labucala elisanda kulungiswa ngokutsha kwiLake Gogebic eliMhle. Eli gumbi libonelela ngeyakho indawo yabucala elungele abakhenkethi, abahamba ngekhephu, abalobi, okanye abazingeli. Umbono omangalisayo wonxweme olusentshona lweLake Gogebic, kunye nechibi eliziimitha ezingama-50 ukusuka kwifestile yakho yangaphambili. Ireyithi eyona ilungileyo uya kuyifumana echibini!
Eli gumbi linebhedi yendlovukazi enye, kunye nendlovukazi enye i-futon. Eli ligumbi lehotele elinegumbi elinye / igumbi lokuhlambela elinye. Izinto eziluncedo ziquka i-wifi, iTV, ifriji / ifriji, ikofu, ishawari, kunye nokufikelela kwichibi le-gogebic ngemoto yekhephu okanye isikhephe sakho. Eli gumbi lingalala abantu abadala aba-3 ngokukhululeka okanye ukuya kuthi ga kwi-4 abantu ukuba abantwana bayajoyina uhambo lwakho!
4.79 ·Izimvo eziyi-66
4.79 out of 5 stars from 66 reviews
4.79 · Izimvo eziyi-66
Esi sakhiwo sinikezela ngendawo yokuhlala yabucala kunye nembono yokuphumla ezolileyo yeLake Gogebic. Kukho ezinye iikhabhini kwindawo. Ibha kunye nokuzonwabisa kubandakanya ivenkile encinci kunye nepetroli zimalunga ne-1/2 yeemayile kude. Kufutshane nohambo olufutshane oluya kwi-Alligator Eye ejonge iLake kunye neMihlaba ekufutshane. Ngaba ulungele uhambo olude? Umgama oyimizuzu engama-30 ukuya kwengama-40 yipaki yelizwe yeeNtaba zePorcupine eneemayile ezininzi zokuhamba intaba kunye nokubona indawo kunye neLake Superior nje emantla.
Umbuki zindwendwe ngu- Dominic
Esi sisetingi sekhabhinethi kunye nabanini bafumaneka kwangoko kunye / okanye umgama wemizuzu eli-15.